जमिन छोडेर हावामा उडेको राजनीति
भुईं तहका मानिसलाई पीडा दिनको लागि सामाजिक, साँस्कृतिक विभेद र अहिलेको दलालतन्त्र काफी छ । यतिखेर तिनीहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने एजेण्डाहरुको खाँचो छ । किनकि अहिले पनि धर्म, परम्परा, संस्कृति र सामाजिक रीतिथितिको नाउँमा मानिसबाट मानिस उत्पीडित छ । यतिमात्र होइन, उत्पीडित वर्गभित्रै एउटा अर्कोको खाँटी दुश्मन बनेर बाँचेको छ । त्यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार अज्ञानता भएको छ । समाज र संस्कृतिमा विद्यमान मूल्य–मान्यताहरु कति अत्याचारी छन्, त्यसका दृष्टान्तहरु दिनदिनै देख्न र सुन्न विवश छौं हामी । अहिले पनि दाइजोको नाउँमा महिला मारिएका छन् । बोक्सीको नाउँमा प्रताडित गरिएका छन् । जातीय तथा साँस्कृतिक विभेदले उत्पीडित वर्ग नै प्रतिरोधविहीन देखिन्छ । विचौले धन्दा गर्नेहरु रातारात मोटाउँछन् । आफ्नै पौरखमा बाँच्छु भन्ने झन–झन गरीब हुनुपर्ने उल्टो थिति कायमै छ । राजनीतिले समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु असरल्ल छन् ।
राजनीतिमा जब तीभन्दा बाहिरका एजेण्डा थोपरिन्छन् घाउहरु पुरिनुको साटो झनै थपिन्छन् । कुनै पनि रोगको जरामा उपचार नगरी हाँगा र पात मात्र छिमल्नु भनेको रोगलाई झनै झांगिने वातावरण दिनु हो । यतिखेरका घटनाक्रमहरुले त्यही देखाउँदैछन् । केही समयअगाडि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । जसले उसका गतिविधिहरुलाई थप प्रतिक्रियामुखी बनाउने काम गरेको छ । केही दिनअघि मुठभेडको हवाला दिंदै प्रहरीले सर्लाही जिल्लाका नेता कुमार पौडेलको हत्या ग¥यो । त्यसको विरोध सरकारभित्रै र बाहिरबाट भइरहेको छ । शृंखलावद्धरुपमा भएका धरपकड र हत्याको विरुद्ध सो पार्टीले नेपालबन्द लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यो पार्टीप्रति तुलनात्मक रुपले सहानुभूति राख्ने पंक्ति ठूलै भएको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ तर राजनीतिक लाइनप्रति सहमत भने देखिन्न । यसरी नै समानान्तर रुपमा घटनाक्रमहरु अगाडि बढ्दै गएमा त्यसको मूल्य राज्यपक्ष र विद्रोहीहरुले त चुकाउनुपर्ने हुन्छ नै तर सिङ्गै समाजले पनि चुकाउनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । राज्यपक्षका व्यवहारहरुलाई हेर्दा कतै यो फासिवादको अभ्यास त होइन ? प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको नेकपाको जनयुद्धकालीन आन्दोलनको निरन्तरताको प्रयत्न नेपाली समाजकै लागि अर्को आत्मघाती खेल साबित हुने त होइन ? यता पनि प्रश्न र विभिन्न आशंकाहरु गरिन थालेका छन् ।
बितेको दुई दशककालीन अवधि निकै उथलपुथलकारी अवधि रह्यो । माओवादी आन्दोलनले हजार बर्षको नेपाली समाजमा विद्यमान निद्रामाथि धावा बोल्यो । तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यसभित्र अत्याचारका अंशहरु थिएनन् अनि यान्त्रिक अन्धानुकरण हावी थिएन । हजारौं वर्षको निद्रामा सुतिरहेको समाजबाटै उठेको आन्दोलन पूरै विकृतिमुक्त हुन्थ्यो भनी सोच्नु पनि वस्तुवादी कुरा थिएन । यो अवधिमा धेरै चर्का–चर्का कुरा मात्र होइन समाजले पचाउन नसक्ने व्यवहार पनि भए । तर ती सबै कुराहरुको केन्द्रमा समाज बदल्ने कुरा थियो । मानिस बदल्ने कुरा थियो । काम कति भयो त्यो बेग्लै कुरा हो । आन्दोलनको दौरानमा जे भए ती सबै क्रान्तिको नाउँमा भएका छन् । अर्कोतिर राज्यपक्षबाट जे जति राज्य आतङ्क सिर्जना गरियो त्यो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने नाउँमा भएका छन् । विगतमा कतिपय यस्ता द्वन्द्वहरु सिर्जना गरिएका छन् जसको साइनो कुनै क्रान्तिसँग छैन । जुन आरोप नभएर वास्तविक थिए भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पार्टीको बैठकमा पेश भएका दस्तावेजहरुमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पछि गएर यस्ता सम्झौताहरु गरिएका छन् जसको स्वार्थ केही मुठ्ठीभरहरुसँग बाहेक कुनै भुइँतहका मानिसहरुसँग छैन । यतिखेर त्यही क्रान्तिको ज्वारभाटाबाट गुज्रिदै आएका हस्तीहरु सरकारका छन् । के उनीहरुले विगतको समीक्षा र आगतको आँकलनसहित वर्तमानको दृष्टिकोण बनाउन जरुरी देखेका छन् ? कति छिट्टै भुले उनीहरुले आफै हिडेर आएको बाटो ? यो प्रश्न एकातिर छ अर्कोतिर जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै आएको कुुरा पनि पुष्टि हुँदैछ त्यो हो, “राज्यसत्ता भनेको दमनकारी हुन्छ ।” कि त “जनताको दमन गर्ने राज्यसत्तासँग सम्झौता गर्दिन” भन्नुप¥यो अन्यथा त्यसकै सती जानुप¥यो । यी दुईमा एक कुरा पुष्टि गर्ने जिम्मा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री कमरेड बादलहरुको नै हो । अरुको होइन ।
निर्मम ढंगले आत्मसमीक्षा नगर्ने राजनीतिको पतन अवश्यम्भावी छ । त्यो पनि कल्पनातीत रुपमा अत्यन्तै छिटो हुने गर्छ । चाहे त्यो आन्दोलनमुखी राजनीति होस् या सत्तामुखी । आत्मसमीक्षा गर्ने राजनीतिको राजनीति त जोगिएला तर आन्दोलन झनै जोगिदैन । आन्दोलन जोगाउनको लागि जनताको पक्ष, समाज परिवर्तनको पक्षसँग एकाकार भइराख्नु भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन । आत्मसमीक्षाको पाटोलाई किस्ता किस्तामा तिलान्जली दिंदै जाँदा आज विश्व कम्युनिष्ट क्याम्पलाई ब्यूँझाउन सफल भनिएको नेपाली माओवादी आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? त्यो सबैलाई जगजाहेर नै छ । केही मानिसहरुले तर्क गरेजस्तो युद्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको कारणले मात्र त्यो धराशायी भएको होइन । त्यो आन्दोलनका अगुवाहरुको दाबी मान्ने हो भने क्रान्तिको यात्रामा कार्यनीतिक सिफ्ट मात्रै थियो रणनीति र आदर्शको परित्याग थिएन । के परिणाममा त्यसो देखियो त ? देखिएन । परिणाममा त यथास्थितिमै कहिल्यै शान्त नहुने सत्ताभोग बाहेक बाँकी जम्मै कुरा भ्रम मात्र हुन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको देखियो । तसर्थ राजनीतिक सिफ्टको नाउँमा समाज रुपान्तरणमुखी राजनीति यथास्थितिको सेवकमा फेरिन सक्दो रहेछ । त्यसैलाई टिकाउ र दीर्घजीवी राजनीति मान्ने कि अवसान मान्ने त्यो हाम्रो विवेक र पक्षधरतामा भर पर्ने कुरा हो ।
समाज र मानिस बदल्ने ध्येय जब आफूलाई शासकमा बदल्नेमा पुगेर टुंगिन्छ त्यसपछिको राजनीति अरु जे पनि हुनसक्छ तर आन्दोलन हुन सक्दैन । आन्दोलनबाट च्यूत भएको राजनीतिले आत्मसमीक्षा गर्दैन बरु झनपछि झन शासकबाट कुरुप शासकमा फेरिदै जान्छ । हिजो आन्दोलनको पर्याय बनेका धेरै पात्रहरु आज शासकमा फेरिएका छन्, यो कुनै भ्रम होइन । शब्दाडम्बर र चर्को क्रियाशीलता आफैमा आन्दोलन होइनन् । जनयुद्धकालीन राजनीतिभित्र आन्दोलनमा परिणत हुन नसकेका त्यस्ता के आलाकाँचा अभ्यासहरु विद्यमान थिए ? जसले गर्दा यति छिट्टै त्यो निर्माण गरेका आदर्शहरुलाई कत्ति पनि जोगाउन नसक्ने गरी मुखको भरमा ढल्न पुग्यो ? यसको आत्मसमीक्षा गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी तुलनात्मकरुपमा आन्दोलनकारी शक्ति मानिएको नेतृत्वपंक्तिको काँधमा नै छ ।
हरेक प्रतिक्रियामुखी राजनीतिको टुंगो अन्ततः यथास्थितिवादभित्र सत्ता साझेदारीमा गएर लागेका दृष्टान्तहरु आफ्नै आँखा अगाडि छन् । सत्ता साझेदारीको आधारमा भएका सांगठनिक विद्रोहरु त झन मौसमी विद्रोहमात्र साबित भएका छन् । त्यसको भुक्तभोगी वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बादल आफै हुन् । प्रचण्डलाई गद्दार घोषणा गर्दै बाहिरिएका बादलको निम्ति रातारात कसरी उनै प्रचण्ड फेरि नायक भए ? के यो राजनीतिभित्र विद्यमान साँस्कृतिक हैसियत, प्रवृत्ति र मनोविज्ञान अध्ययन गर्न लायक पाटो होइन ?
अतः विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाज र मानिस बदल्ने राजनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यदिशा तय गर्नु नै क्रान्तिको हितमा हुनेछ । त्यसको लागि जनयुद्धकालीन ह्याङओभरबाट मुक्त हुनै पर्छ । यसको अर्थ वर्गसंघर्षका आधारभूत मान्यताको जगमा नेपाली समाज, संस्कृति र अर्थतन्त्रभित्र विद्यमान शोषणकारी दैत्यका नशाहरु छिनाल्ने मिहिन कामबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो कार्यदिशाले समाज रुपान्तरणमुखी आन्दोलनको एउटा ठूलो स्पेश तयार हुनसक्छ । विगतको पुनरावृत्ति र नेपाली सामाजिक जमिनका अनि आजकै जल्दाबल्दा सवालहरु बिर्सिएर दिएका नारा र भइरहेका गतिविधिहरुले एउटा ऊर्जावान शक्तिको क्षय औं समयको बर्बादी भन्दा अरु केही निम्त्याउन सक्दैन ।
धिताल सक्रिय राजनितिक/साँस्कृतिक चिन्तक हुन । अनुसन्धानमूलक लेख लेख्ने धिताल कवि पनि हुन् ।